Kuma noolid xarunta soo dhaweynta | Fedasil info - informatieplatform voor asielzoekers in België
Aan ahayn xarunta qaabilaada
Kuma noolid xarunta soo dhaweynta
Haddii aadan joogin xarunta soo dhaweynta inta lagu jiro baaritaanka codsigaaga maganalyada, ma heleysid wax taageero dhaqaale. Waxaad xaq u leedahay caawin caafimaad.
Muddada ay Belgium baarayso codsigaaga magangaliyada caalamiga ah, waxaad ku heleysaa hoy meesha soo dhaweynta, taas oo inta badan ah xarunta soo dhaweynta ee Fedasil ama Red Cross. Dowlada Belgian ayaa bixiso cuntadaada iyo hoygaaga.
Waa suurtogal inaadan joogin xarunta soo dhaweynta (xeerka 207 "Ma lahan Bandhig") sababtoo ah
Waxaad doorataa inaadan ku noolaan xarunta soo dhaweynta: waxaad leedahay booskaaga gaarka ah ee deegaanka ama waxaad aadi kartaa qoyska ama saaxibada. Waxaad sidaas darteed ku nooshahay ciwaan gaar ah.
Fedasil muusan ku siinin meesha soo dhaweynta: xaq uma lihid meesha soo dhaweynta.
Taageeradee ayaad heshaa haddii aad, sida magangaliyo doon, aadan ku nooleyn xarunta soo dhaweynta?
Waa inaad bixisaa cuntadaada iyo dayactirkaaga gaarka ah
Waa inaad bixisaa taageeradaada dhaqaalaha
Waxaad xaq u leedahay caawin caafimaad
Miyaa tahay guri guurayo? Ogeysii adeegyada magangalyada.
Miyaad u guureysaa ciwaan kaloo gaar ah? Hubi inaad soo dirtid ciwaankaaga cusub adeegyada magangaliyada (IO iyo CGRS). Midaan darteed, isticmaal foomka: Verklaring: Wijziging gekozen woonplaats (NL); Déclaration : changement de domicile élu (FR).
Ma qabtaa su’aal ku saabsan xaalkaaga ee Belgium ama xaquuqdaada soo dhaweynta?
Passendalestraat 2 – 1000 Brussels
Isniinta illaa Jimchaha, laga bilaabo 8:30am subaxnimo ilaa 12:30pm duhurnimo
02/227 41 51 (laga bilaabo 9am subaxnimo ilaa 12 galabkii iyo 2pm ilaa 5pm galabnimo).
Kuma noolid xarunta soo dhaweynta laakin waxaad u baahantahay gargaarka caafima… Fedasil Infopoint - Qariiradaha Google www.asyluminbelgium.be: ogeysii isbadelka ciwaanka